डेङ्गु Archives – Samacharpati
प्युठानमा ६ वर्षीया बालिकामा देखियाे डेङ्गु सङ्क्रमण
स्वर्गद्वारी, २ असार । प्युठान नगरपालिका – ६ की एक ६ वर्षीयामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ । बिरामी भएर अस्पताल आएकी बालिकामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । बालिकाको जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा उपचार गरिए पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि आज बुटवल सिफारिश गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । गत वर्ष असोजमा एक र कात्तिकमा दुई गरी तीन जनामा […]
काठमाडौँ, ३१ जेठ । म्याग्दीमा शुक्रबार थप एक जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ । एक्कासी टाउको दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, आलस्य हुनेजस्ता लक्षण देखिएपछि अस्पतालमा उपचारका लागि आएका मङ्गला गाउँपालिका–३ बरङ्जाका ४९ वर्षीय पुरुषलाई डेङ्गु पोजेटिभ देखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रकाश सुवेदीले बताउनुभयो । बिरामीको ट्राभल हिष्ट्री नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमै डेङ्गु फैलिने एडिस जातको लामखुट्टे सक्रिय […]
बागलुङ, ३ जेठ । कोरोनाको माहामारि बिच बागलुङमा डेंगु देखिएको छ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्तीमा २३ वर्षीया युवतीमा डेंगु देखिएको हो । उनको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचार भएको डा. शैलेन्द्र वि. पोखरेलले जानकारी दिए । उक्त युवतिलाई ज्वरो आएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनलाई डेंगु रोगको लक्षण देखिएपछि परीक्षण गरिएको हो । केहि […]